नवयूग प्रवेशको शुभकामना हामी सबैलाई | ImageKhabar <!-instant articles-->
एउटा संयोग, उता नासाको अन्तरिक्ष यान मंगलबार नै मंगलग्रहमा अवतरण हुन पुग्नु र नासाका वैज्ञानिकहरु ठुलो उपलब्धिमा रम्नु, यता नेपाल रातारात समृद्धिको सपना बोकेर काठमाडौं सहरको बिजुलीको पोल पोलमा देशका ठुला र चर्चित अखबारमा कभरपेज भरी छाउनु पक्कै पनि सपना कनेक्सनको छनक हो । देशले समृद्धिको यात्रा तय गरेको उल्लास । आखिर सपना देख्नेले हो पूरा गर्ने, लक्ष्य लिनेले हो बाटो देखाउने । ओली सपनाको खेतीले बाली भित्र्याउन मङ्सिर महिना नै कुर्नु अर्को सुखद संयोग हो । हामी यतिबेला बाली भित्र्याउन मस्त छौं, ब्यस्त छौं । सरकार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत जनताको घर उज्यालो पार्ने बाली पस्कने पुर्व सन्ध्यामा भव्य शृङ्गार पेटार गरेर सूचनाको ढोल पिट्दै छ । नयाँ तरंग पैदा गर्दैछ । जनता उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा गर्दैछन्– सरकारले कुरा अब व्यबहार मै उतार्न लागेको हो त ? बुद्धिजिवी तर्क गर्दैछन्, विमर्श गर्दैछन्, यसका चुनौती र सम्भाव्य कार्यान्वयन बारेमा ।
सामाजिक सुरक्षा अवधारणाबारे आ–आफ्ना दावी प्रस्तुत गर्दैछन् विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ता र समर्थकहरु । कोही काङ्ग्रेसको पालामा बनेको अवधारणा भनेर ठोकुवा गर्छन् त कोही तत्कालीन माओवादी बाबुरामको भनेर जिकिर गर्छन् भने कोही मनमोहनको पालादेखि एमालेले बनाएको अवधारणा अहिले साकार बन्दै गरेको तर्क राख्छन् । सामजिक संजाल आज ओलीको उछितो काढ्न र भक्ति गर्न भरिभराउ छ । सामाजिक संजालको विशेषता के भयो भने यहाँ कुनै पनि विषय उठाउनु पर्छ, अनभिज्ञ कोही हुन्नन् । कसैलाई हार्न मन हुँदैन र यथार्थ बक्ने पनि दुर्लभै हुन्छ्न् । सब विषय बेत्ता, सबै पोख्त चर्चाको विषयमा अनुसन्धान गरेर बिद्याबारिधी नै सम्झेर तर्क वितर्क पेश गर्छन्, कोही आग्रह राखेर लेख्छ्न्/बोल्छ्न् त कोही अन्धाधुन्ध भक्तिगान गाउँछ्न् । समालोचना कमै आलोचना र समर्थन धेरै हुन्छ । तटस्थ मत र विचार अतिकम पाइन्छ । लेखाइ बोलाइ र गराइमा कुनै न कुनै फ्लेवर देखिनु हाम्रो समाजको राजनीति प्रतिको झुकाव हो । मोह हो । यद्यपि म फ्लेवर छैन भन्छु मेरो लेखाइ बोलाइ टिप्पणी, प्रति–टिप्पणीमा फ्लेवर आएछ आउँछ भने, कसैले देख्छ भने म खण्डन गर्दिनँ । जसले जस्तो देख्छ उस्तै भन्छ । म यो समाजकै उपज हुँ, कसैलाई मन पराउन, समर्थन गर्न र रोज्न अनि कसैलाई मन नपराउन आलोचना गर्न स्वतन्त्र छु मलाई कुनै पार्टीको दाम्लो स्वीकार छैन । कसैको दासता मन्जुर छैन । सकेको समालोचना मेरो अभिस्ट हो । सामाजिक सुरक्षा अवधारणाका प्रवर्तक को हुन्, कुन पार्टीले त्यो बोकेको थियो, त्यो महत्त्वपूर्ण सवाल रहेन । कसले कार्यान्वयन गर्ने अठोट लियो र चुनौती स्वीकार गर्‍यो, त्यो सवाल म महत्त्वपूर्ण ठान्छु । सामाजिक सुरक्षा कोष प्रणालीको छोटो बिकासक्रम र निरंतरता यहाँ असान्दर्भिक हुनेछैन ।
लोक कल्याणकारी राज्यको एक असल कार्यक्रमको खुलेर प्रसंशा जनताले गरेका छन् । जनताको मनमा बस्ने कार्यक्रम कसलाई मन पर्दैन र यसको तारिफ कसले गर्दैन र ? एउटा बिर्सन नहुने कुरा र पक्ष के हो भने पेन्सन, नागरिक कोष आदि गैर सरकारी क्षेत्रको हकमा पनि धेरै पहिलेदेखि चलनमा छ। अहिले कुनै नयाँ असंगठित क्षेत्रका कामदारमा लागु भयो कि भएन ? के अब खोलामा गिटी कुट्ने, डोकोमा तरकारी बेच्ने, खाजा पसलमा भाँडा माझ्ने, सडकमा फोहोर बटुल्नेको पनि पेन्सन हुने हो ? अनौपचारिक क्षेत्रका असंगठित मजदुर र श्रमजीवीहरुको बारेमा राज्यको कुनै निति बन्छ कि यहि सामाजिक सुरक्षा योजनाले सम्बोधन गर्छ ? यसको जवाफ सरकार पक्षबाट अपेक्षित छ ।
‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने लुइ शैलीको अनुकरण गरेर प्रधानमन्त्री प्रस्तुत भएका छन् जसले उनको प्रचारको भोक त मेटिएला तर जनताको खुन पसिना र गाँस काटेर तिरेको करको दुरुपयोग भयो, हुनेछ । काम गर्नेभन्दा बढी प्राचार्य गर्ने शैली बदल्नु प्रधानमन्त्री र उनको मन्त्रीहरुको अबको प्रमुख दायित्व हो । नबोलेर, नभनेर काममार्फत नै लोकप्रिय बन्न सकिन्छ । ताम झाम र अनावश्यक विज्ञापन सरकारको ढुकुटी रित्याउने र केही सिमित पत्रिकामार्फत प्राचार गराइराख्ने कुटिल चालबाजीमात्र हो । पत्रिकामार्फत विज्ञापन र बिजुलीको पोलमा ओली बाको फोटो टास्ने झन्डै ७/८ करोड रुपैयाँ खर्चले गरिबको घरमा न्यानो पुर्‍याउन सकिन्थ्यो । पोस्टरले होइन कामले नयाँ यूगको आरम्भ हुन्थ्यो ।
टोल टोलमा सिंहदरबार पुग्न मुस्किल भएको बेला पोल पोलमा नयाँ यूग लेखेर ओली सरको तस्बिर राखेर समृद्धि छिटो आउँछ र ? सिंहदरबारमा फोटो टास्नमात्रै म प्रधानमन्त्री भएको होइन भन्ने, प्रचण्डको भित्तामा टाँसेको फोटो देखाएर भित्ते राष्ट्रपतिको उपमा दिएर गिज्याउने ओलीलार्इ जनताको करको पैसामा आफ्नो फोटो बेच्न कुन मोहले काम गर्‍यो ? जनताको पक्षमा लोक कल्याणकारी कार्य गरे बिजुलीको पोल पोलमा होइन, जनताको मन मुटुमा बस्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान नभएर ओली सरले यो प्रचारको निचता प्रकट गर्नुभएको पक्कै नहोला । कुन चाकरीदारको मोह जालमा प्रधानमन्त्री फस्नु भएको हो, त्यसको खोजबिन सम्बधित दल र नेता कार्यकर्ताले हेक्का राख्लान् नै । पानी परेको जस लिनेले खडेरि परेको अपजस लिन्न भन्न मिल्दैन, सुहाउँदैन । प्रधानमन्त्रीलाई बदनाम गराएर असफल पार्ने आन्तरिक र बाह्य षडयन्त्र नहोला भन्न पनि सकिँदन । किनकि शक्ति र स्वार्थको लागि राजनीतिमा नाजायज केही हुँदैन र देखिएको पनि छैन । राजा हुने र बन्ने देखिने मनसुवा प्रधानमन्त्रीले नपालेकै बेस । जनता शासक राजनीतिज्ञ होइन सेवक प्रधानमन्त्री रोज्छन्, मन पराउँछन् ।